BF Series Assembly aka uwe ya isi ma na aku igwe Zhejiang Benfa Technology Co., Ltd arụ ọrụ na R & D BF usoro sooks ịkpa igwe, akpaka sooks ọnwụ igwe, braided sooks nzukọ igwe .O nwere ike etinyere na elu & ala nsogbu sooks, Car na moto bike roba sooks, breeki sooks, ịgba roba sooks factory. Nzukọ igwe etinye PLC, HMI, pneumatic cell, n'ibu ogologo ngagharị, ukporo nkenke, nchekwa, mfe ejikwara, ịnọgide na-enwe na-adị mfe. Nzukọ igwe ...
BF Series Assembly aka uwe ya isi ma na aku igwe
Zhejiang Benfa Technology Co., Ltd arụ ọrụ na R & D BF usoro sooks ịkpa igwe, akpaka sooks ọnwụ igwe, braided sooks nzukọ igwe .O nwere ike etinyere na elu & ala nsogbu sooks, Car na moto bike roba sooks, breeki sooks, ịgba roba sooks factory.
Nzukọ igwe etinye PLC, HMI, pneumatic cell, n'ibu ogologo ngagharị, ukporo nkenke, nchekwa, mfe ejikwara, ịnọgide na-enwe na-adị mfe. Nzukọ igwe-emezu akpaghị aka ibufe aka uwe ya isi ma na aku, kpọkọta ndị uwe na-akpaghị aka, ọkara akpaka-ezukọta isi ma na aku, akpaka injection na coreand nut. , Okokụre ngwaahịa na-akpaghị aka sere. The dozie braided waya mfe rụrụ, uwe bụghị na ọnọdụ, ike-ezukọta isi ma na aku, braided waya agbajikwa mkpịsị aka. welie mmepụta arụmọrụ. arụ ọrụ ọsọ: 460-540pcs kwa hour, esighi ike na ọrụ ike. melite ngwaahịa mma.
arụ ọrụ arụmọrụ
Chikọtanu aka uwe ya isi ma na nut
Previous: Mgbanwe sooks Core na aku Assembly Machine BFZX-A
Osote: Big Size braided sooks Crimper Machine BFKY-75A
Compressor Air sooks Assembly Machine
Core Na aku Chikọtanu Machine
Core Na aku Assembly Machine
Nkesa sooks Assembly Machine
Flexibel sooks Assembly Machine
Aku na Core Chikọtanu Machine
Ịgba sooks Assembly Machine
Mgbanwe sooks Core na aku Assembly Machine BFZX-A
Uwe ọkara Auto Assembly igwe BFZT-A
Ọnụ ara Ma uwe Assembly Machine BFZP-C1
Uwe Ma nwoke aku Assembly Machine BFZP-C2